जनस्वास्थ्य विज्ञ भन्छन् : कोरोना संक्रमणले रूप फेर्दैछ
जनस्वास्थ्य विज्ञ डा. रवीन्द्र पाण्डेले कोरोना भाइरसको संक्रमणले रूप फेर्न थालेको बताएका छन् । आइतवार सामाजिक सञ्जाल फेसबूकमा एक लेख लेख्दै कोरोना भाइ...
नेपालीमा कोरोना संक्रमणसंग लड्ने इम्युनिटी पावर बढी रहेको जनस्वास्थ्य विज्ञ डा. रवीन्द्र पाण्डेले दावी गरेका छन् । विश्वमा कोरोना संक्रमणका कारण धेरैको मृत्यु भइरहेको अवस्थामा नेपालमा मृत्यु दर धेरै नहुने बता...
जनस्वास्थ्य विज्ञ डाक्टर रविन्द्र पाण्डेले रोगलाई पेलेर अघि बढ्ने नेपालीहरूको संस्कार भएकाले कोभिड १९ पनि पेलिएरै जाने बताएका छन् । शुक्रवार सामाजिक सञ्जाल फेसबूकमा लेख्दै डाक्टर पाण्डेले नेपालीहरूको सामाजिक सा...
हाम्रो शरीरलाई आवश्यक पर्ने विभिन्न खाद्य तत्वमा भिन्न भिन्न क्यालोरी पाइन्छ । हाम्रो शरीरलाई दिनमा कति क्यालोरी चाहिन्छ त्यो जान्नु अघि तपाईं महिला हो कि पुरुष, ...